Japana: Fotoan’ny sery indray. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2009 7:30 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, srpski, English
Raha toa moa ny fitiavana irery ihany no mihalohalo eny an-danitra an. Efa miditra tsikelikely ny lohataona, ary ny manomboka miparitaka eny rehetra eny ny vovom-bony avy amin’ny hazo antsoina hoe Sedera. Nanomboka ho ofisialy toa Japan any Kafunsho (ny sery). Noesorina ny sokola (chocolat) tsy lany tamin’ny andron’ny mpifankatia mba azahoana mahazo toerana hasiana ireo fitaovana hiatrehana ny Kafunsho toy ny: mosoara, ny aro-tava, ny hanitra mint atete sy ny maro hafa.
Nanao misimisy ny vatsy ara-panafody avy hatrany ireo ela nihetezana (be antitra na olom-pahalalana) raha toa kosa ireo tsy manan-traikefa dia manadihady ny kohaka isan’isany, ka mbola manontany teny hoe ity tokoa ve ny taona “iantombohan’ny kafunsho” eo amin’izy ireo.
“Kely sisa dia fotoanan’ny sery”, nataon’ny kalandrakas
Maro ireo antontan’isa milaza hoe firy ireo mponina mijaly nohon’ny Kafunsho – eo anelanelan’ny 15 – 30%, avo ny isan-jato teo amin’ny toerana Metropolitana. Lazaina fa ratsy dia ratsy tokoa ny fiantraikan’ny kafunsho teo amin’ny toe-karena: milaza ny fanambarana miverimberina nataon’ny Toeram-pikarohana momba ny fiainana Dai-ichi fa nampidiana ny fitombon’ny tahan’ny vokatra anaty (P.I.B: Produit interieur Brut) ho 0,6% ny kafunsho ny taona 2005. Nihena ny fanjifan’ny tsirairay satria miezaka mijanona ao an-trano daholo ny olona, raha etsy an-daniny kosa ny fihemoran’ny fivangongoana dia mampihena ny vokatra azo avy amin’ny asa.
Herinandro mialoha ny fanambarana nataon’ny birao misahana ny toetr’andro ny 13 Febroary mikasika ny rivo-mahery tatsimo voalohany “haru-ichiban” tamin’ity taona ity izay nanamarika ny fahatongavan’ny lohataona tamin’ny fomba ofisialy, dia betsaka ireo mpitoraka blaogy no mijery ny amim-pahatahorana ny fiantombohan’ny andron’ny Kafunsho.
Ohatra itovizana ohatra ny bolongna nataon’i eternal_name:
Ity indray ve ny andron’ny taona – ilay vanim-potoana mampalahelo indrindra ho ahy eo amin’ny taona – ny vanim-potoanan'ny kafunsho? Ny maso na ny orona fotsiny no voan’ny aretina ho an’ny olona sasany, fa ny ahy kosa dia izy roa mihintsy no voa daholo ary tena marary tokoa izany. Tsy maintsy mandeha mivoaka mitady ranom-panafody atete amin’ny maso, aro-tava, fanafody, ronono mandry (yaourt) ny tenako.
Mitaraina i Mizuka Yukizawa, mpianatra mikarakara fanadinana hidirana eny amin’ny anjerimanontolo:
Efa manidina eny rehetra eny ny vovom-bony….Raha ho ratsy ity amin’ny andron’ny fanadianan dia hitomany aho, sniff… Manantena aho fa handray fepetra ny anjerimanontolo manoloana ny kafunsho. tsy ny fijaliana avy amin’ny kafunsho no ho tombotsoa eo amin’izao tontolo izao…
Malahelo I SOW fa manaiky fotsiny ihany araka ny filazany:
Toy ny roa taona lasa izay, rehefa mivoaka any ivelany aho mandritra ity fotoana ity dia lasa manjavona ny masoko. Nitranga indray izay tamin’ity taona ity, nefa vao andro iray monja no nanomboka nanidina ireo vovom-bony. Tsy tao an-tsaiko mihintsy izy ity satria tsy niezaka niheritreritra ny momba izany aho, kanefa androany dia azo lazaina fa kafunsho ity.
Manontany teny ihany I Chiro Mama fa sao dia tratran’ny kafunsho ny alikany. Manazava ny lojika izay entin’ny finoanoam-poana mahery avy amin’ny yaorta (yaourt) I Yumeyume. Mampahafantatra ny fiasan’ny fanafody ezahana sy am-panantenaina I Usabuta.